Libiya”Ugu Yaraan Lixdan Qof Oo Ku Geeriyooday Weerar Dagaal Oo Ka Dhacay | Berberatoday.com
Libiya”Ugu Yaraan Lixdan Qof Oo Ku Geeriyooday Weerar Dagaal Oo Ka Dhacay
Tripoli(Berberatoday.com)-Dowladda uu caaalamku taageero ee dalka Liibiya ayaa shaqada ka joojisay wasiirka gashaandhigga si baaritaan loogu sameeyo weerar lagu qaaday saldhig milateri oo ku yaal koonfurta dalkaasi, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 60 qof.
Inta badan dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa waxaa la sheegayaa inay ahaayeen ciidamo ka madaxbanaa milateriga dalkaasi oo aana aqoonsaneyn dowladda uu caalamak taageero.
Ciidamada la weeraray ayaa saldhigaasi milateri gacanta ku hayay tan iyo bishii Disembar ee sannadkii hore.
Ciidamada weeraray saldhiga Brak Al-Shati ayaa waxay ahaayeen ciidamo ku howlgalayay magaca Qaramada Midoobay ee jooga caasimadda Tripoli. Balse ciidamada ay is hayaan ayay ku edeyeen inay dileen askar iyo welibo dad rayid ah oo ka howgala koonfurta dalka Liibiya.
Xafiiska ra’iisul wasaaraha dalkaasi ayaa beeniyay inuu amray weerarka, waxaana ay shaqadii ka fariisiyay wasiirka gashandhiga iyo taliyihii ciidanka weerarka fuliyay.
Guddi loo xil saaray inuu ka soo talabixiyo arintan ayaa haatan haysto muddo labo todobaad ah oo uu xaqiiqda weerarka ugu gudbiyo ra’iisul wasaaraha, waxaana hadda uu ka sal gaarayaa ciddii ka dambeysay weerarka.